Servisy Rosiana An-Tserasera Mangataka Amin’ny Vehivavy Handoa Fampahatsiarovana Ny Sipany Hividy Voninkazo Ho Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Servisy Rosiana An-Tserasera Mangataka Amin'ny Vehivavy Handoa Fampahatsiarovana Ny Sipany Hividy Voninkazo Ho Azy Ireo
Voadika ny 06 Avrily 2016 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Español, čeština , 日本語, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Noarahabaina tamin'ity fanontaniana manao hoe manaraka ity “Efa ela ve ny sipanao no nanome voninkazo anao?” ny mpitsidika ny servisy vaovao ao Rosia “Mila voninkazo aho”. Manome toky avy eo ny tranonkala fa afa-manampy izy. Mialoha ny fanazavana ny hanaovana izany, dia lazainy ny fanazavana efatra mahatonga ny sipany tsy manao fanomezana voninkazo amin'ny vehivavy tiany: sahirana dia sahirana izy, tsy mieritreritra izy fa misy dikany be amin'ny vehivavy izany, mieritreritra izy fa fandaniam-bola izany voninkazo izany, na mieritreritra izy fa amin'ny andro fety ihany no ilaina izany voninkazo izany.
Miaraka amin'ny katro-doha, dia azavain'ny “Mila voninkazo aho” izay ataony: tsy mandefa voninkazo na amin'iza na iza izy, mandefa hafatra mety manelingelina ao amin'ny kaonty media sosialy kinendriny amin'ny fividianana vonninkazo hoan'ny vehivavy sipany izy.
“Amin'ny fampiasana fitaovana fanaovana dokambarotra an'aterineto,” hoy ny tranonkala, ”izahay no mampahatsiahy amim-pahamalinana ny lehilahy sipanao fa efa elaela ihany izy no nanome voninkazo farany, ary dia asongadina fa zava-dehibe hoan'ny vehivavy ny voninkazo.”
Afaka mividy tapakila “fampahatsiarovana” karazany telo ny mpanjifa, miainga amin'ny 50 robla (tokony ho $0,75) ka hatramin'ny 150 robla($2,20), mandany vola bebe kokoa, mba isian'ny dokambarotra manelingelina bebe kokoa. Miaraka amin'ny fandoavam-bola, ny hany ilain'ny servisy dia ny rohy mankany amin'ny kaonty Vkontakte an'ilay lehilahy olon-tiany, ary miainga avy ao amin'izay ny tantaram-pitiavana mandeha ho azy.
“Anaovy karazana ankamantatra ilay olon-tianao,” hoy ny fivakin'ny bokotra lehibe indrindra. Sary: tranonkalan-tservisy Mila voninkazo aho.
Araka ny haba-tranonkalam-baovao TJournal, tamin'ny faramparan'ny volana janoary no nisokatra ny servisy. Ny sampan-draharaha mpanao dokambarotra AddZIP, izay miorina ao St. Petersburg sy Veliky Novgorod no mitantana azy. Nolazain'ny sampandraharaha tamin'ny TJournal fa tetikasa ara-barotra feno ny tranonkala ary efa manana volamaty. Nilaza ny AddZIP fa efa eo am-pikarakarana raharaha mitovy amin'izany ihany koa, natao na ho an'ny sakaiza lahy na ho an'ny sakaiza vavy, nokendrena hampahatsiahy hanao zavatra isan-karazany amin'ny ankilany. (Tsy hita kosa ny resaka hiantsoana ho an'ireo mpifankatia lahy tia lahy na vavy tia vavy.)
Nisy tokoa ny mpiserasera Vkontakte sasantsasany nahamarika ilay servisy, na tsy ny vehivavy rehetra aza no nanararaotra handany doka an'aterineto natao hanatsarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny olon-tiany. Ohatra, nanoratra momba ny “Mila voninkazo aho” tao amin'ny pejiny Vkontakte i Elena Ochkova [efa nafenina ny lahatsoratra] hoe, “Aleoko izaho mihitsy no mividy tolipa vitsivitsy toy izay handany vola amin'ity zavatra tsy misy dikany ity. Sa ahoana?”